Gudoomiyaha Maxkamada Sare oo markii ugu horeysay ka hadlay dacwadii xisbiga Himilo Qaran | Somsoon
Home WARAR Gudoomiyaha Maxkamada Sare oo markii ugu horeysay ka hadlay dacwadii xisbiga Himilo...
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf oo la hadlay lanta Af-Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay dacwaddii Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Shariif Sheikh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ka gudbiyay madaxda dowladda federaalka.
Guddoomiye Baashe ayaa sheegay in hadda ay gacanta ku hayaan dacwadaas maalmaha soo socda ay billaabi doonaan dhageysigeeda dacwadda uu u soo gudbiyey Xisbiga Himilo Qaran eek u aadan xayiraadii garoonka Aadan Cadde loogu geystay Madaxweyne Shariif Sheikh.
Baashe Yuusuf guddoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa sheegay in haatan ay maxkamaddu awood u leedahay in ay qabato kiiskaas ayna madax banaantahay, isagoo sheegay in dhinicii kale ee ay ku socotay dacwadu ay la wadaageen ayna ka soo jawaabeen.
Xisbiga Himilo Qaran oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka hogaamiyana uu ka yahay madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka Shariif Sheikh Axmed ayaa dacwad ka dhan ah xayiraddii safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo bishii September u gudbiyay Maxkamadda Sare.
Article horeTaliyaha Ciidanka Asluubta oo ka jawaabay hadal caro badan dhaliyay oo ka soo yeeray
Article socoda Shabakaddii Shabaab uga howlgali jirtay galbeedka Muqdisho oo Maxkamad lasoo taagay